theZOMI: Burma News International - May 3, 2013
Burma News International - May 3, 2013
Alliance not taking part in Nippon Foundation’s warning to Shan of aid suspension: UNFC
The United Nationalities Federal Council (UNFC) did not take part in the decision of the Nippon Foundation, the Japanese philanthropic organization, to issue warning to the Shan State Army (SSA) ‘South’ to suspend its humanitarian aid assistance if the group failed to participate in the UNFC activities, said the grouping atameeting in Chiangmai on 1 May.
White House announces extension of national emergency status for Burma; eases travel ban
Washington, D.C.-- Acting to extend Burma's current national emergency status classification in the United States, President Barack Obama filedanotice indicating that the status, originally declared on May 20, 1997, is to continue, according toaletter released by the Office of the United States Press Secretary Thursday afternoon. The national emergency with respect to Burma was set to end on May 20th without an extension. The emergency status extension for Burma continuesaban on investment and restrictions on financial transactions with Burmese military, according toastatement published by the U.S. Campaign for Burma Thursday via Facebook.
Maday Islanders march to the CNPC office on Thursday to issuealist of demands and register their displeasure with the company's oil and gas pipeline project. Photo: Thein Hlaing / Mizzima
The Myaungmya Farmers’ Union made calls on Tuesday for authorities to compensate landowners whose land was confiscated to make way for the Myaungmya Industrial Zone in the Ayeyarwady [Irrawaddy] Region atarate of two million kyat (US$2,300) per acre.
The dance group from the Overseas Karen Refugee’s Social Organization (OKRSO) based in Bangkok, are honoured to be included inaceremony that pays respect to His Majesty, King Bhumibol Adulyadej of Thailand.
Karen National Union, Ler Mu Lah Township leaders warn that there isarisk ofadivision between the local people and the KNU if the organizations district or central leaders allow the construction of the Tenasserim Dam, in Southern Burma.
ထိုင်းနိုင်ငံရှိ မြန်မာ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်သားများအတွက် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ရရှိရန် အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ခွင့် ထပ်မံရရှိရန် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေကြောင်း အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးမြင့်သိန်း က ဆိုသည်။
မွန်စာ မူလတန်း ဖတ်စာနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ရေးဆွဲပြုစုပြီးဖြစ်
ကျောင်းချိန်ပြင်ပတွင် မွန်စာပေ သင်ကြားနိုင်ရန် မူလတန်း မွန်ဖက်စာ စာအုပ်နှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း အချို့ကို ကျွမ်းကျင်သော မွန်ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ရေးသား ပြုစုပြီး ဖြစ်ကြောင်း မွန်ပြည်နယ် လှုမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာလှဦး က ပြောသည်။
RCSS တပ်ဖွဲ့နယ်မြေထဲသို့ အစိုးရတပ်များတိတ်တဆိတ်ကျူးကျော်
အစိုးရတပ်များသည် ရှမ်းပြည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကောင်စီ (RCSS) နယ်မြေ ထဲသို့ ကြိုတင်အကြောင်း ကြားခြင်း မရှိဘဲ တိတ်တဆိတ် ၀င်လာသည့် အတွက် မေလ (၁) ရက်နေ့ တွင် တနာရီ ခန့်ကြာ တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု RCSS မှ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောက်ဆိုင် က ဆိုပါသည်။
ချင်းကျေးရွာမီးရှို့မှု မီဇိုရမ် NGOs များပြစ်တင်ရှုတ်ချ
ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့က မီဇိုရမ်ပြည် နယ် Champhai ခရိုင်ရှိ Saikhumphai ကျေးရွာ၏ စာသင်ကျောင်းနှင့် ဘုရားကျောင်းကလွဲပြီး လူနေ အိမ် ၄၀ ကို Vaphai ကျေးရွာလူထုမှ မီးရှုခဲ့ သည့်အပေါ် မီဇိုရမ် NGOs များက ပြစ်တင် ရှုတ်ချခဲ့ကြသည်။
အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက် WGEC ပြင်ဆင်
တိုင်းရင်းသားများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အလုပ်အဖွဲ့ WGEC ( Working Group for Ethnic Co-ordinating) သည် အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးအရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည့် အခါ တင်ပြရမည့် အချက်များကို ကြိုတင် ပြင်ဆင်သည့် အနေဖြင့် (၃) ရက်တာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု ပြောခွင့်ရသူ ခွန်ဥက္ကာက ဆိုပါသည်။
ရခိုင်ကျေးရွာ ၁၇ ရွာမှ ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး အချက် ၁၂ ချက်တောင်းဆို
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်ဖြူမြို့နယ် မဒေးကျွန်းတွင် လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့ စီမံကိန်း ဒေသ အတွင်းရှိ ကျေးရွာပေါင်း ၁၇ ရွာနှင့် ဒေသအတွင်းမှ လူမှုအဖွဲ့အစည်း ၃ ဖွဲ့က တောင်းဆိုချက် ၁၂ ချက်ကို တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ဒေါက်တာထွန်းအောင်ကို ထောင် ၆ နှစ် နောက်ထပ် သက်တမ်းတိုး
မောင်တော ဆူပူ အကြမ်းဖက်မူနှင့် ပတ်သက်ပြီး ထောင် ၁၁ ကျော် ချမှတ်ခံထားရသူ ဒေါက်တာထွန်းအောင်ကို နောက်ထပ် ၆ နှစ် ထောင် သက်တမ်း တိုးလိုက်သည်ဟု Burma Campaign UK ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြသည်။
သျှမ်းမြောက်၌ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ထပ်မံပေါ်ပေါက်- ထိရောက်အောင်မြင်မှုရှိ
အုပ်စုဥက္ကဌမှဦးဆောင်၍ ဒေသတွင်း ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့ သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း တန့်ယန်းမြို့နယ်၌ ထပ်မံပေါ်ပေါက်လာရာ တိုက်ဖျက်မှုမှာ ထိရောက်အောင်မြင် မှုရှိသည်ကိုတွေ့ ရကြောင်း သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းသတင်းရပ်ကွက်ကဆိုပါသည်။
လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကုလအဖွဲ့ နှင့် ဆွေးနွေး
မြန်မာနိုင်ငံ လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ နောင် လာမည့် ရည်မှန်းချက်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ ထုတ်ဖော်မည့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတခုကို ကုလသမဂ္ဂ လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာ ပရောဂျက် UNIAP Myanmar နှင့် လူကုန်ကူးမှု တားဆီးရေး ဗဟိုအဖွဲ့တို့ နေပြည်တော်တွင် ပူးပေါင်းကျင်းပကြသည်
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တန့်ယန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ သျှမ်းပြည်တပ်မတော်၏ လွယ်စေးတပ်စခန်းအား အစိုးရတပ်က ယမန်နေ့ညမှ ယနေ့မနက်ပိုင်းအထိ အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်နေကြောင်း SSPP သတင်းရပ် ကွက်ကဆိုပါသည်။